ကျွန်တော် ဒီကနေ့ ရက်စွဲနဲ့ DVB သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဘလောက်နည်းပညာဟော ပြောပွဲ အစိုးရက ပိတ်ပင် ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းနေတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြောချင်ပါတယ်။ အခုပြောတဲ့သတင်းကို ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း ပင့်ကူကနေ ကြားသိလာတာဖြစ်ပြီး ကိုဖိုးသူတော်ကို ပြောရက ကျွန်တော်သိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသတင်းကို ဖတ်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ အချက်အလက်တွေ မှားယွင်းနေတဲ့ အပြင် ကျွန်တော်တို့ပွဲစီစဉ်သူတဦးဦးက ပြောကြားထားတဲ့ ပုံစံမျိုးလဲပေါက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ အခုနှစ်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျုတာ ပညာရှင်အသင်းနဲ့ ပူးတွဲ တင်ဆက်ဖို့နဲ့ အသေအခြာပြောရရင် အဲဒီအသင်းရဲ့ အောက်ကနေ ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ် ဖို့စီစဉ် ခဲ့တာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘလောက်တွေကို အများက နိုင်ငံရေးအသုံးချပစ္စည်းတခု အဖြစ်ဘဲ မြင်နေတာရယ်၊ အများက ဘလောက်ဂါဆိုရင် ဒီလိုချည်းဘဲ ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို ခွာချ ပြီး အင်တာ နက်ပေါ်က နည်းပညာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အတွေ့အကြုံတွေ ၊ အခွင့်အလမ်းတွေကို ပြောပြပေးချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျုတာ ပညာရှင်များအသင်း ကို အကူအညီတောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစဦးပိုင်းမှာ သဘောတူညီမှုတွေရခဲ့ ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များမဟုတ်တဲ့အတွက် အခု ပွဲကို ဦးဆောင်ပေးဖို့ရာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အကြောင်း ပြောခဲ့တာကြောင့် တူတူမလုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်ပြီး။ သူတို့ ဦးဆောင်မှုမပါ ဘဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ဆက်လက် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းလဲ သိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နီးကပ်နေတဲ့ အချိန်၊ စီစဉ်စရာအများအပြားနဲ့ အခြားသော မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာများ ပေါ်ပေါက်မှာ စိုးရိမ် တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆက်မလုပ်ဖို့ရာ ကျွန်တော်တို့ပွဲစီစဉ်သူများက ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက် မလုပ်ဖြစ်တော့တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ လုံးလုံးလျားလျား ပိတ်ပင်တယ်ဆိုတဲ့ ဖိအားပေးမှုများ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ကို မကျရောက်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်က ရိုးသားပါတယ်၊ သူတပါး အသုံးချခံမဖြစ်ချင်ပါဘူုး။
ပြုလုပ်မဲ့နေရာကလဲ မြန်မာအင်ဖိုတက်အဆောက်အဦးသာဖြစ်ပြီး မနှစ်ကပွဲမှာလဲ အားပေးလေ့လာသူ ၆၀၀ ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပွဲနဲ့အခုပွဲရဲ့ အဓိက ဦးတည်ချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာလူငယ်လူကြီးမရွေး လက်တကမ်းက နည်းပညာနဲ့ ဗဟုသုတတွေ အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးပွားစေချင်တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အခုလို မည်သည့်သတင်းဌာနကိုမှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းများမရှိသလို သတင်းရေးတဲ့သူတွေကလဲ ကာရကံရှင်တွေ ရဲ့ ပြောစကားမဟုတ်တဲ့ ကိုးကားသတင်းတွေကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်အောင် တဆိတ်ကိုတအိတ်လုပ်ပြီး ပြောဆိုရေးသား ဖော်ပြတာတွေကို ဆက်မလုပ်စေချင်ပါဘူး။
စာဖတ်သူအနေနဲက အခုပေးထား တဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြီး ချင့်ချိန်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဆိတ်ကို တစ်အိတ် မဟုတ်ပါ။ တစ်စိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ (နှစ်စိတ် = တစ်ခွဲ၊ နှစ်ခွဲ = တစ်တင်း၊ တစ်တင်းခွဲ = တစ်အိတ်)
ပြည်ပသတင်းဌာနတွေမှာ DVB ကနည်းနည်းလွန်တယ် ဒါကြောင့် သိပ်မကြိုက်ဘူး
ထားလိုက်ပါဗျာ..အမြဲတမ်း အဲလိုချည်းပဲ ဘာမှ စဉ်းစားမနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကိုပဲ အင်တာဗျူး ပြီးမှ ရေးသလိုလို ချည်းဗျ သတိလဲ ထားဦးနော် သိတယ် မဟုတ်လား၊ ကျုပ်တို့ ပြည်တွင်းမှာ ဘယ်လို နေခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာ......
သတင်းက တိကျမှဖတ်လို့ကောင်းတာ သူတို့ ဟာက ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ထပ်ကို သိနေကြလိုနဲ့စိတ်ပျက်စရာ ။ဖွတာလည်းကြည့်ဖွပေါ့ ဆရာသမားတို့ ရယ် အထဲက သူတွေကိုဖြင့် အားနာစရာ ။
usaemfjyKvkyfcJhwJh jrefrmbavmh*grsm;owif;eJ@ygwfoufvdk@ tenf;i,faqG;aEG;vdkygw,f? trSeftwkdif; ajym&&ifawmh 'Dpmudk usaemfjyefvnfa&;om;p&mudk ta}umif;r&Sdyg? (bma}umifhvJqdkawmh usaemfhowif; vHk;0rSm;,Gif;rSKr&Sdbl;vdk@ t}uGif;rJhvufcHxm;vdk@ jzpfygw,f?)odk@ayr,fh vGwfvyfpGm jyefvnfacsycGifh&Sdw,fvdk@ ,lqrdwJhtwGuf 'Dpmudka&;&jcif; jzpfygw,f?
tpuaepajym&&if 'Dowif;udk ra&;om;cif 3&ufavmuftvkdrSmuwnf;u 'Dowif;udk usaemf&xm;jyD; jzpfygw,f? ydkjyD;aocsmatmifeJ@ aoaocsmcsm CCee ajymEdkifr,fh owif;&if;jrpfawGudk vdkufvHpkaqmif;aecJhwmyg? 'Dowif;ra&;om;cif tenf;qHk; jrefrmjynfwGif;u bavmhvkyfaeolawGa&m bavmh*gawGeJ@eD;pyfolawGa&m 5a,mufxufrenf; pum;ajymjyD; jzpfygw,f? olwdk@wawGudk,fwkdifu olwdk@toHudkroHk;zkd@ uwdawmif;xm;ovkd yGJydwfcH&wmawmh aocsma}umif; ta}umif;jyef}um;cJhygw,f? 'ghtjyif jynfwGif;omru jynfyu bavmhvkyfaeolawGjzpfwJh rcifrif;aZmf ukdpsmef rarjidrf;wdk@udkvnf; pHkprf;ar;jref;jzpfcJhygw,f? (olwdk@vuf&Sdxkdif;EdkifiHrSm &Sdaeygw,f ar;}unfhvdk@ &ygw,f?) owif;vkyfr,fhae@rSm aoaocsmcsmajymEkdifwJh pme,fZif;orm;wOD;u ol@toHudkcGifhjyKa}umif;eJ@ eHrnfryg&if&ygw,fqdkwJh cGifhjyKcsufa}umifh tydwfcH&wJhta}umif; tJ'Dpme,fZif;orm;toHudk oHk;vkdufygw,f? olwa,mufxJeJ@ar;jyD;a&;&if raocsmrSmpdk;vkd@ tjcm;qef@usifzufaxmifhjzpfwJh }uD;rSK;usif;yr,fqdkwJh jrefrmEdkifiH uGefysKwmynm&Sifrsm;toif; zkef;eHygwf 652276udk xyfjyD;qufoG,fygw,f? owif;xJrSmoHk;xm;wJhtwkdif; tJ'D0efxrf;u jyKvkyfcGifhray;wm [kwfw,fvdk@ jyefajzwmudk tm;vHk;vnf; owif;xJrSm }um;}urSmyg? aemufowif;&if;jrpfwa,mufuawmh jrefrmbavmh*gwa,mufyg ?oluawmhtydwfcH&wJhtay: a0zefoHk;oyfwmyg?
qkdawmh owif;udk jyefvnfoHk;oyfr,fqdk&if---
1? tydwfcH&w,fvdk@ pme,fZif;orm;wa,mufuajymw,f
2? }uD;rSK;usif;yr,fh jrefrmEdkifiH uGefjyLwmynm&Sifrsm;toif;u wm0ef&Sdolwa,mufu tydwfcH&w,fqdkwmudk twnfjyKajym}um;w,f?
3? }um;aeowif;&if;jrpfwa,muf&Jh a0zefoHk;oyfcsufygw,f?
qkdawmh 'Dowif;[m b,fae&murSm;,Gif;aeygovJ? tydwfrcH&wmudk tydwfcH&w,fvdk@ a&;&ifawmh usaemfhowif;trSm;yg? tck[mu wu,ftydwfcH&wmudk tydwfcH&wJhta}umif;a&;wmudk rSm;w,fqdk&ifawmh b,f[mawGrSm;ovJqdkwm wdwdusus tcsuftvufeJ@ a&;om;zkd@vdkygvdrfhr,f? &yfuGufxJuvlawGa&;ovdk ydkufqH&wdkif;vkyfae}uw,f pwJhtoHk;tESKef;awG oHk;zdk@roifhawmfyg? owif;wyk'fvHk;udk aoaocsmcsm jyefvnfem;axmifjyD;rS usaemfhxHudk pma&;om;apcsifygw,f? toHeJ@v$ifhwJh owif;wyk'fudk em;raxmifyJ 0'fqdkufrSma&;wmavmufeJ@ a0zefrqef;ppfapvdkyg? usaemfhowif;eJ@ygwfoufvdk@ 'DavmufyJ jyefvnfa&;om;vkdygw,f? 'Dowif;[m vHk;0rSm;,Gif;wJh owif;wyk'fr[kwfbl;qdkwmawmh rsufpdydwfrjiif;bl;qdk&if tm;vHk;odEdkifygvdrfhr,f? toHk;jyKxm;wJh rl&if;toHzdkifrsm;yg yl;wGJay;ydk@ vdkufygw,f?
i have no zawgyi font this computer
so pls win burmese
ကျနော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါများသတင်းနဲဏ္ဍပါတ်သက်လိုဏ္ဍ အနည်းငယ်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်၊ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်တော့ ဒီစာကို ကျနော်ပြန်လည်ရေးသားစရာကို အေ}ကာင်းမရှိပါ၊ (ဘာေ}ကာင့်လဲဆိုတော့ ကျနော့်သတင်း လုံးဝမှားယွင်းမှုမရှိဘူးလိုဏ္ဍ အ}ကွင်းမဲ့လက်ခံထားလိုဏ္ဍ ဖြစ်ပါတယ်၊)သိုဏ္ဍပေမယ့် လွတ်လပ်စွာ ပြန်လည်ချေပခွင့်ရှိတယ်လိုဏ္ဍ ယူဆမိတဲ့အတွက် ဒီစာကိုရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်၊
အစကနေစပြောရရင် ဒီသတင်းကို မရေးသားခင် ၃ရက်လောက်အလိုမှာကတည်းက ဒီသတင်းကို ကျနော်ရထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ ပိုပြီးသေချာအောင်နဲဏ္ဍ သေသေချာချာ ဃဃနန ပြောနိုင်မယ့် သတင်းရင်းမြစ်တွေကို လိုက်လံစုဆောင်းနေခဲ့တာပါ၊ ဒီသတင်းမရေးသားခင် အနည်းဆုံး မြန်မာပြည်တွင်းက ဘလော့လုပ်နေသူတွေရော ဘလော့ဂါတွေနဲဏ္ဍနီးစပ်သူတွေရော ၅ယောက်ထက်မနည်း စကားပြောပြီး ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတိုဏ္ဍတတွေကိုယ်တိုင်က သူတိုဏ္ဍအသံကိုမသုံးဖိုဏ္ဍ ကတိတောင်းထားသလို ပွဲပိတ်ခံရတာတော့ သေချာေ}ကာင်း အေ}ကာင်းပြန်}ကားခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပက ဘလော့လုပ်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ မခင်မင်းဇော် ကိုဈာန် မမေငြိမ်းတိုဏ္ဍကိုလည်း စုံစမ်းမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ (သူတိုဏ္ဍလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရှိနေပါတယ် မေး}ကည့်လိုဏ္ဍ ရပါတယ်၊) သတင်းလုပ်မယ့်နေဏ္ဍမှာ သေသေချာချာပြောနိုင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက သူဏ္ဍအသံကိုခွင့်ပြုေ}ကာင်းနဲဏ္ဍ နံမည်မပါရင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ေ}ကာင့် အပိတ်ခံရတဲ့အေ}ကာင်း အဲဒီစာနယ်ဇင်းသမားအသံကို သုံးလိုက်ပါတယ်၊ သူတယောက်ထဲနဲဏ္ဍမေးပြီးရေးရင် မသေချာမှာစိုးလိုဏ္ဍ အခြားဆန်ဏ္ဍကျင်ဖက်ထောင့်ဖြစ်တဲ့ }ကီးမှုးကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျုတာပညာရှင်များအသင်း ဖုန်းနံပါတ် ၆၅၂၂၇၆ကို ထပ်ပြီးဆက်သွယ်ပါတယ်၊ သတင်းထဲမှာသုံးထားတဲ့အတိုင်း အဲဒီဝန်ထမ်းက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာ ဟုတ်တယ်လိုဏ္ဍ ပြန်ဖြေတာကို အားလုံးလည်း သတင်းထဲမှာ }ကား}ကမှာပါ၊ နောက်သတင်းရင်းမြစ်တယောက်ကတော့ မြန်မာဘလော့ဂါတယောက်ပါ ၊သူကတော့အပိတ်ခံရတဲ့အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်တာပါ၊
ဆိုတော့ သတင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်---
၁၊ အပိတ်ခံရတယ်လိုဏ္ဍ စာနယ်ဇင်းသမားတယောက်ကပြောတယ်
၂၊ }ကီးမှုးကျင်းပမယ့် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပြူတာပညာရှင်များအသင်းက တာဝန်ရှိသူတယောက်က အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာကို အတည်ပြုပြော}ကားတယ်၊
၃၊ }ကားနေသတင်းရင်းမြစ်တယောက်ရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပါတယ်၊
ဆိုတော့ ဒီသတင်းဟာ ဘယ်နေရာကမှားယွင်းနေပါသလဲ၊ အပိတ်မခံရတာကို အပိတ်ခံရတယ်လိုဏ္ဍ ရေးရင်တော့ ကျနော့်သတင်းအမှားပါ၊ အခုဟာက တကယ်အပိတ်ခံရတာကို အပိတ်ခံရတဲ့အေ}ကာင်းရေးတာကို မှားတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဟာတွေမှားသလဲဆိုတာ တိတိကျကျ အချက်အလက်နဲဏ္ဍ ရေးသားဖိုဏ္ဍလိုပါလိမ့်မယ်၊ ရပ်ကွက်ထဲကလူတွေရေးသလို ပိုက်ဆံရတိုင်းလုပ်နေ}ကတယ် စတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ သုံးဖိုဏ္ဍမသင့်တော်ပါ၊ သတင်းတပုဒ်လုံးကို သေသေချာချာ ပြန်လည်နားထောင်ပြီးမှ ကျနော့်ထံကို စာရေးသားစေချင်ပါတယ်၊ အသံနဲဏ္ဍလ$င့်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို နားမထောင်ပဲ ၀ဒ်ဆိုက်မှာရေးတာလောက်နဲဏ္ဍ ဝေဖန်မဆန်းစစ်စေလိုပါ၊ ကျေနော့်သတင်းနဲဏ္ဍပါတ်သက်လိုဏ္ဍ ဒီလောက်ပဲ ပြန်လည်ရေးသားလိုပါတယ်၊ ဒီသတင်းဟာ လုံးဝမှားယွင်းတဲ့ သတင်းတပုဒ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ မျက်စိပိတ်မငြင်းဘူးဆိုရင် အားလုံးသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ မူရင်းအသံဖိုင်များပါ ပူးတွဲပေးပိုဏ္ဍ လိုက်ပါတယ်၊
ဟုတ်ကဲ့ မျက်စိပိတ်မငြင်းပါဘူး မျက်စိဖွင့်ပြီး နေတာဖြစ်လို့ အရမ်းသိသာထင်ရှားနေပါတယ်။ မှားတာက မှားတာပေါ့ဗျာ ဘာလို့ ထပ်ရှင်းနေတာလဲ။
ထက်ချာပလာ ရှင်းလင်းချက်အား ဘာလချာဂေါက်မှ လက်ခံသင့်သည် မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့
ဟလို ကိုထက်ရာဇာ ကျနော်တော့ အကျယ်တ၀င့် မရှင်းလင်း ချင်တော့ပါ။ အကြောင်းရင်းကတော့ သတင်းရင်းမြစ်သည် ပွဲစီစဉ်သူများထံမှ ရောက်လာခြင်း မဟုတ်သည်က တစ်ကြောင်း၊ ယမန်နှစ်က တက်ရောက်လာသူများ စာရင်းမှားယွင်းသည်က တစ်ကြောင်းတို့ကြောင့် ကျနော်များမှ လက်မခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအသားမှာလည်း ပွဲစီစဉ်သူများကို အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်နိုင်သည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ကျနော်တို့မှ ၀ိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားသတင်းသမားမဟုတ်လား၊ ကျွန်တော်ပြောချင်တာ အခုပြောတဲ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေဆို တာ ကျွန်တော်တို့ အော်ဂနိုက်ဇာတွေက ပြောတာ လား၊ ဒါမှမဟုတ် MCPA ကပြောတာလား သေသေချာချာ ကွဲ ကွဲ ပြားပြား သိအောင်ပြောပါ။ ခင်ဗျားအခု ပြောတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က ဘယ်သတင်းဌာန၊ ဘယ်သူတွေကိုမှ ဆက်သွယ်ပြောဆိုတာမျိုး မရှိခဲ့ သလို၊ အခုပွဲကို ဘယ်သူကမှ အတင်းအကြပ် ပိတ်ပင် ခဲ့တာမရှိဘူးဆိုတာ ကျွန်တော့် ရှင်းလင်းချက်ထဲ မှာ ပါတယ်ဆိုတာ ကိုသိစေအပ်ပါတယ်။
အခွင့်အရေးတခုအတွက်စကားတခွန်းကို လွယ်လွယ် မပြောကြစေချင်ပါဘူး။ ပြောတဲ့သူတွေရှိရင် ပြောတဲ့သူရှင်းပါလိမ့်မယ်။
Thet Htoo@Myat Lone said…
မြန်မာပြည်တွင်းက ဘလော့လုပ်နေသူတွေရော သူတို့နဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေဆိုတာ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်နေသူတွေ မဟုတ်ပါ။ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်နေသူ ဘယ်နှစ်ဦးရှိတယ်ဆိုတာ ဘလော့တွေမှာ ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ ပြောတဲ့စကားတွေသာ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပါမယ်လို့ ပြောထားခဲ့ပြီးသားပါ။
ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူတွေဆိုရာမှာလည်း စီစဉ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်က ပြောရုံနဲ့တောင် သေချာပြီလို့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီစဉ်သူတွေက ကိုယ့်အပိုင်းနဲ့ကိုယ် တာဝန်ယူပြီး လုပ်နေကြရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တခါတလေ အချိတ်အဆက်မမိ ဖြစ်နေရင် သတင်းမှားတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် စီစဉ်သူ အနည်းဆုံး ၄ ဦးခန့်ပြောမှသာ ဒါကို မှန်ကန်တဲ့ သတင်းလို့ အတိအကျ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှာပါ။ နောက်တစ်ချက်က သေသေချာချာပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းသမားကိစ္စပါ။ သေသေချာချာပြောနိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုများ သိနိုင်ပါသလဲ။ ပွဲစီစဉ်သူများထက်တောင် ပိုပြီး သေချာသိနိုင်ပါသလား။
နောက်တစ်ချက် MCPA ဝန်ထမ်းက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာ ဟုတ်တယ်လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့။ ဘယ်သူက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာပါလဲ။ MCPA ဥက္ကဌက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာလား၊ အစိုးရက ပြုလုပ်ခွင့်မပေးတာလား။ MCPA ကို လှမ်းမေးတဲ့သူများဆီက တဆင့်ပြန်ကြားရသမျှ သူတို့ကို အစိုးရက ပြုလုပ်ခွင့်ပိတ်ပင်တယ်လို့ ပြန်ဖြေကြောင်း တစ်ယောက်ကမှ မပြောကြပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် လူကိုယ်တိုင်သွားမေးတော့လည်း အဲဒီလိုမျိုး လုံးဝပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါဘယ်သူဘက်ကမှ ဘက်လိုက်ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း၊ ကြားရတဲ့အတိုင်း ပြန်ပြောခြင်းပါ။ ကိုထက်ရာဇာရဲ့ သတင်းမှာတော့ စစ်အစိုးရက ပိတ်ပင်တယ်လို့ ခေါင်းစဉ်မှာပါ ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် ရေးသွားပါတယ်။
ကိုထက်ရာဇာ ပြောသလို သတင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါဦးမယ်။
၁။ "အပိတ်ခံရတယ်လို့ စာနယ်ဇင်းသမားတစ်ယောက်က ပြောတယ်" လို့ဆိုပါတယ်။
ဘယ်သူက ပိတ်တာပါလို့ အတိအကျ ပြောနိုင်ပါသလား။ အစိုးရဆိုရင် ဘယ်ဌာနရဲ့ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောပါတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါသလား။
၂။ "MCPA က အပိတ်ခံရတာကို အတည်ပြုပြောကြားတယ်" လို့ဆိုပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ အစိုးရက ပိတ်တယ်လို့ ပြောပါသလား။ ပြောတယ်ဆိုရင် အချက်အလက်အတိအကျ ပြောပါသလား။ MCPA က ကျွန်တော်တို့ကိုပြောသမျှ အထဲမှာရော၊ ဖုန်းနဲ့မေးသူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပြောပြရာမှာရော အပိတ်ခံရတယ်လို့ သုံးနှုန်းသွားတာမျိုး လုံးဝမရှိပါ။ MCPA ရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလို့ပဲ ပါပါတယ်။ ဘယ်သူက ပိတ်တယ်လို့ လုံးဝ မပြောပါ။
၃။ ကြားနေရင်းမြစ်တစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့လည်း ပြောပါရစေ။ ကိုထက်ရာဇာအနေနဲ့ ပွဲစီစဉ်သူတွေကို တစုံတရာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး အတည်ပြုချက်ရယူဖို့ထက် သတင်းသမားတို့၊ ပြည်ပ ဘလော့ဂါတို့၊ ကြားနေအရင်းအမြစ်တို့ကို ဘာကြောင့်များ ပိုပြီး ဦးစားပေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရပါသလဲ။ ပွဲစီစဉ်သူတွေကို ဆက်သွယ်ရတာ ခက်ခဲတယ်လို့တော့ အလွယ်မပြောစေချင်ပါ။ ပွဲစီစဉ်သူတွေ ဘယ်သူတွေပါဆိုတာ သူတို့ဘလော့အားလုံးမှာ တင်ပြထားကြပြီးသားပါ။ ကိုထက်ရာဇာတောင် အခုလို ကွန်မန့်ဝင်ရေးသွားပြီးသားဆိုတော့ ဘယ်သူတွေဆိုတာ မသိလို့ပါ ဒါမှမဟုတ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ မလွယ်ကူလို့ပါလို့တော့ ဖြေနိုင်မယ်မထင်ပါ။
ကိုထက်ရာဇာ အကြိမ်ကြိမ်ပြောသလို ကျွန်တော်လိုက်ပြောရရင် အပိတ်ခံရတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဌာနက ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို ပြောပါတယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိရှိပဲ ရေးတာဟာ မှားပါတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေထက် ကိုထက်ရာဇာက ဘာတွေများ သာလွန်မြင့်မြတ်နေပါသလဲ။ ကျွန်တော်တို့အပါအဝင် အားလုံး ရပ်ကွက်ထဲမှာ နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုထက်ရာဇာရဲ့ အသုံးအနှုန်းကလည်း မသင့်တော်ပါ။
Seminar ဖြစ်မြောက်ရေးစီစဉ်သူတွေရဲ့ တရားဝင်ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှ မပါပဲ အခြားအခြားသော သူများရဲ့ ထင်မြင်ပြောဆိုချက်များနဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို မရေးသားစေလိုပါ။ တကယ်လို့ ရေးသားခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုဇော်ဇော်ပြောခဲ့သလို အခွင့်အရေးအတွက် လုပ်တဲ့သူတွေကိုယ်တိုင် ရှင်းကြပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင် ရှင်းကြပါ။
2007 မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ တက်ရောက်တဲ့ လူဦးရေ လုံးဝ မှားယွင်းခြင်း၊ ဧည့်သည်အဖြစ် တက်ရောက်ဟောကြားမယ့်သူ လုံးဝမှားယွင်းခြင်းတို့ကို အချို့သော သတင်းရေးသားသူများအတွက် မှားနေကျ ပုံမှန် အမှားများအနေနဲ့ အထူးတလည် မပြောဆိုတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဒီသတင်းဟာ သတင်းအချက်အလက် အမှားများစွာပါဝင်ပြီး ပြောကြားတဲ့သူများရဲ့ အထောက်အထားခိုင်လုံမှု မရှိခြင်း၊ အကြောင်းအရာ အနှစ်သာရအားဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ ကောင်းကျိုးတစုံတရာ မဖြစ်စေနိုင်ပဲ ဆိုးကျိုးကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်လို့ပဲ အားနာစွာနဲ့ ပြောကြားပါရစေခင်ဗျာ။
ထက်အာပလာ သူတို့ဘာသာသူတို့ညံ့လို့ မဖြစ်တဲ့ဟာ မင်းက ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ဝင်ရှုပ်တော့ ငပွ DVB လည်းမြောင်းထဲရောက်တာပေါ့ ဟားဟား
ချစ်သူရေ တကယ်ဆို ခတ်နာနာနှတ်ထားတဲ့ နှလုံးသားကောင်းကောင်း တစ်ခုပါကွယ်။ အချစ်တွေမယိုစိမ့်စေရပါဘူး၊ ဘောင်ဘင်မခတ်အောင်တော့ ခပ်ပြည့်ပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ။
ကန်-မြောက်ကိုရီးယား သဘောတူညီချက်ကို နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုး စင်ကာပူ၊ ဇွန် ၁၂ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျူံအန်တို့ ၏ သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည့် သဘောတူညီချက်ကို နှစ်ဦးစလုံးက လက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။ ၁။ နှစ်နိုင်ငံပြည်သူတို့ ငြိမ်းချမ်းပြီး စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးစေရေးကို ရည်မျှော်၍ အမေရိကန်-မြောက်ကိုရီးယား ဆက်ဆံရေးသစ်ကို ထူထောင်ရန် ၂။ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် တည်ငြိမ်သောငြိမ်းချမ်းမှု အရှည်တည်တန့်စေရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရန် ၃။ ၂၀၁၈ ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ပန်မွန်ဂျွန်းကြေညာစာတန်းကို ထပ်လောင်းအတည်ပြုပြီး၊ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် နျူလက်နက်များအလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးကို ရှေ့ရှုဆောင်ရွက်သွားရန် ၄။ စစ်အကျဉ်းသားဟု ဖော်ထုတ်သိရှိပြီးသူများကို အမြန်ဆုံးအပြန်အလှန်လဲလှယ်ရန်အချက်အပါအ၀င် ကျန်ရှိနေသေးသော စစ်အကျဉ်းသားများကိုလည်း ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန် PN002 ref: Key points of the document signed by Kim and Donald Trump at the end of Tuesday's talks: Myanmar la
ဘလောကျရေးတာ ဝါသနာပါတယျ။ လှတျလပျစှာ တှေးတယျ၊ လှတျလပျစှာရေးတယျ။ ဘဝအကွောငျး ကိုယျ့ အတှအေ့ကွုံ မြှဝခေငျြတယျ။ I like blogging. I think freely. I write freely. I want to share my life experience.
digital device .electric car
ISOC Myanmar Chapter
Myanmar fist time on Mount Everest